I-OCO ibetha amanqaku ngomculo wayo we-elektroniki, ubuncinci bayo kunye neepuzzle zayo | I-Androidsis
I-OCO yiphazili entsha engaqhelekanga ye-Android apho kuya kufuneka sibethe ukutsiba ngebhokisi eya kuhamba kunye nomgangatho njengenqanaba. Isihloko se-Android esingumceli mngeni ukusombulula amanye amanqanaba amaninzi analo mdlalo, opapashwe yiSpectrum48 kwiVenkile yeGoogle Play.
Kwaye umculo omninzi we-elektroniki u-OCO ufuna ukunika inqaku ukuba ube ngumdlalo oqhelekileyo ofuna ukuwugqiba nokuba uthini. Inobuninzi bamanqanaba ukuze uphule intloko kwaye kufuneka uphinde umdlalo omnye emva komnye ukusombulula ezo nkqubo zibekiweyo ngoomatshini abajikeleza bengayeki.
1 Ngobuhle obuncinci obuthandayo
2 Yenza amanqanaba akho kwi-OCO
2.1 Iphazili ye-indie engaqhelekanga kwiselfowuni yakho
4 Khuphela iApp
Ngobuhle obuncinci obuthandayo
I-OCO iyothusa ngoomatshini abasisiseko bomdlalo kwaye kubangela ubuninzi bamanqanaba. Kananjalo akufuneki sityeshele i-aesthetics encinci esetyenziselwa ukusinika umdlalo othi ngokubanzi uquka ukuvumelana okukhulu. Oko kukuthi, ivelisa amava emidlalo alungileyo ngomculo we-elektroniki onika loo hoot ipholileyo.
Ngokusisiseko into ekufuneka siyenzile kukutsiba kuloo mizuzu ngqo ukufikelela kula maqonga aya kusivumela ukuba sichukumise ezinye iijometri eziya kuthi zikhokelele kwisisombululo senqanaba. Ubunzima bukho kwinto yokuba la maqonga aya kuba nemingxunya, ajikeleza ngalo lonke ixesha kwaye kuya kufuneka sicamngce xa kufuneka sivumele ukuba singqubane nomnye ukutshintsha icala lenkqubela yethu.
Yiyo loo nto kuya kufuneka siliqonde kwinqanaba ngalinye lokuyigqiba. Ihlala incediswa ngamanye amaqonga okutsiba aya kuthi asivumele ukuba sifikelele kwiindawo eziphakamileyo kwaye ngaloo ndlela sifikelele kwelo qonga lisimema ukuba sichukumise ezinye iijometri esizishiyileyo.
Yenza amanqanaba akho kwi-OCO
Uvakalelo esinalo kukuba i-OCO isinika okuninzi ngento esiyibonayo. Sithetha ngantoni akukho ntengisoUbuncinci kule nto siyidlalileyo asikaboni nto. Ewe kunjalo, gcina ingqalelo yakho ukuba ingangeni kwizikhewu kwaye ke uqhubeke nokudlala ngenani elikhulu lamanqanaba eliwanikayo, okokuqala, simahla.
I-OCO, ngaphandle kwalawo manqanaba awodwa ayi-135, ayasinika Isixhobo sokudala kwinqanaba lokucela umngeni kuthi thina nabahlobo bethu. Ngale ndlela, amava amnandi emidlalo avelayo anyuka ngokubonakalayo. Ayizukuphela nje ukuba wophule intloko ukuze ugqibezele la manqanaba e-135, kodwa kuya kufuneka ukuba ube yi-Machiavellian kwaye uzenzele amanqanaba ngokwakho ukuze wophule iintloko zoogxa bakho.
Ikongeza ixabiso ngakumbi kule mingeni yemihla ngemihla kwaye ikwazi ukufikelela kumanqanaba aveliswe luluntu ngokwalo. Iphazili ekhomba kwiindlela ezininzi kwaye ngamanye amaxesha inikezela ngemvakalelo elungileyo xa zidityanisiwe Amanqanaba angaqhelekanga, isitayile sayo esincinci kunye nesandi se-elektro Oko kubeka intambo yokugqiba inqanaba esikulo.
Iphazili ye-indie engaqhelekanga kwiselfowuni yakho
Ngamafutshane, ukuba kunjalo phambi kwepuzzle ye-indie yalatha iindlela ezilungileyo kakhulu zokuba yenye yeminyaka. Asikuko ukuba siyathanda ukunika uqikelelo, kodwa ixesha esilidlalileyo silonwabele kwaye lisinike imvakalelo yokufuna ukuqhubeka nokudlala ukuze sibone ukuba siyakwazi ukusombulula inqanaba elilandelayo. Sincoma ukuba unike umonde omncinci.
Ngokobuchwephesha uneminyaka elishumi kwaye Sigqamisa oomatshini bamanqanaba ajikelezayo ngezo zinto zichukumisayo kuyilo luyilo. Imibala yegradients kunye nomculo zihamba indlela ende ekufezekiseni amava amnandi okudlala. Inika loo mvakalelo yokuba phambi kwengozi yokwenyani.
I-OCO ifika kwiVenkile kaGoogle yokudlala inomdla wokutsala umdla kwaye ngochukumiso oluncinci kuyilo kunye nomculo we-elektroniki. Ukuba ujonga iimvakalelo ezintsha kunye nepuzzle ngokutya intloko yakho, kunye ne-OCO uyakukufumana konke oku nokunye okuninzi, ulinde ntoni? Sikushiya nge .connect, enye iphazili enesitayile esihle sokubonakalayo.
Isitayile sakhe sokubonakalayo esincinci
Oomatshini bamanqanaba ayo
Isixhobo sokudala kwinqanaba lakho
Umthuthukisi: UMTHETHO 48
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-OCO yiphazili engaqhelekanga yeengqondo ezi-agile kunye nomculo omninzi we-elektro
Iifowuni ezimbini ezintsha zeSamsung ezineekhamera zangasemva ezintathu kunye neebhetri ezinkulu azikafiki